कसरी डाक्टर पत्ता लगाउने तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ र विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ चेकअप - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट प्रेस भारी खेल औषधि बनाम मित्र चेकआउट समुदाय, कम्पनी कम्पनी, समाचार समुदाय
मुख्य >> कल्याण >> एक प्राथमिक हेरचाह प्रदायक कसरी पाउन सकिन्छ जसलाई तपाइँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ
एक प्राथमिक हेरचाह प्रदायक कसरी पाउन सकिन्छ जसलाई तपाइँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ
एक प्राथमिक हेरचाह प्रदायक संग एक कडा सम्बन्ध तपाइँको स्वास्थ्य र वालेट को लागी महत्वपूर्ण छ। तपाईंको ईतिहास र चिन्ताको साथ परिचित एक प्रदायक तपाईंको लागि मेडिकल केयर निजीकृत गर्न सक्षम छ, जसले तपाईंको समय र पैसा बचाउनेछ। यदि तपाईंको चलिरहेको अवस्था छ भने, सहि डाक्टरले तपाईंलाई यसलाई प्रबन्धन गर्न मद्दत गर्दछ - र तपाईंको अन्य स्वास्थ्य पेशेवरहरूसँग काम गर्दछ। तर तपाईं कसरी आफ्नो लागि सही छनौट गर्नुहुन्छ?
कसरी डाक्टर पत्ता लगाउने
गुगल खोजीबाट कुनै अनियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक छान्नुको सट्टा, यी सुझावहरूको खोजी गर्नुहोस् तपाईंको खोजीलाई संकुचित गर्न र तपाईंको अवस्थाको लागि उत्तम स्वास्थ्यसेवा प्रदायक खोज्नुहोस्।
१. तपाईंलाई चाहिएको प्राथमिक हेरचाह प्रदायकको प्रकारलाई विचार गर्नुहोस्।
के तपाई तुलनात्मक रुपले स्वस्थ हुनुहुन्छ र कसैलाई रुचि छ कि तपाईलाई रुचिकर चेक-अप र सामयिक नुस्खाको लागि भरोसा गर्नुहुन्छ? वा तपाइँसँग अधिक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सरोकारहरू छन् र कुनै औषधिको विशेष क्षेत्रमा अनुभव भएको कोही चाहिएको छ? के तपाइँ उस्तै सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट कसैलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ? के यो प्रदायक केवल तपाइँको लागि वा पारिवारिक अभ्यास प्राथमिकता हो? यी प्रकारका प्रश्नहरूले तपाईको स्वास्थ्य आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्न र ठूलो प्रारम्भिक सूची खाली गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन्, संयुक्त राज्यका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा भारतीय अस्पतालका परिवार चिकित्सक राचेल ट्राइपेट भन्छन्।
मेलाटोनिन को कति मिलीग्राम सिफारिश गरीएको छ
२. उनीहरूका प्रमाणपत्रहरू हेर्नुहोस्।
यो राम्रो विचार हो कि एक सम्भावित प्रदायक बोर्ड प्रमाणित छ कि छैन भनेर। उनीहरूको मेडिकल डिग्रीको साथसाथै, यी डाक्टरहरूले रेसिडेन्सी प्रशिक्षण पूर्ण गर्न छनौट गरेका छन् र परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ र प्रमाणपत्रहरू अप-टु-डेट राख्नुपर्दछ। तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ प्रमाणीकरण मामला तपाइँको डाक्टर बोर्ड प्रमाणित छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि। थप रूपमा, तपाईको राज्यमा तिनीहरूको मेडिकल इजाजतपत्र प्रमाणित गर्न चाहानुहुन्छ र हेर्नुहोस् कि यदि भूतकाल वा पेन्डि medical मेडिकल बोर्डको अनुशासनिक कार्यहरू, आपराधिक सजाय, अस्पतालको अनुशासन र चिकित्सा दुर्व्यवहार भुक्तान।
Your. तपाईको बीमा प्रदायकसँग जाँच गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग स्वास्थ्य बीमा, मेडिकेड, वा मेडिकेयर छ भने, तपाईं सम्भाव्य छनौट गर्न चाहानुहुन्छ जसले तपाईंको बीमा योजना स्वीकार्दछ वा जसको अफिस भ्रमणमा सब्सिडी छ। तपाईंको बीमा प्रदायकको वेबसाइट भ्रमण गर्नु तपाईंको क्षेत्रको प्रदायकहरूले तपाईंको बीमा स्वीकार्ने पहिलो चरणहरूमध्ये एक हुनुपर्दछ। यदि तपाइँ एक प्रदायक भेट्टाउनुभयो भने तपाइँ वास्तवमै कसले तपाइँको बीमा स्वीकार गर्दैन भनेर हेर्न चाहानुहुन्छ, त्यो आवश्यक छैन कि एउटा सम्झौता ब्रेकर हो। तपाईंको स्वास्थ्य योजनामा ​​निर्भर रहँदै, तपाईं अझै पनि लागतको अंशको लागि प्रतिपूर्ति गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
सम्बन्धित: कसरी बीमा बिना डाक्टर हेर्न
Family. परिवार, साथी र सहकर्मीहरुलाई सोध्नुहोस्।
अवश्य, तपाई समीक्षा वेबसाइटहरू ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ येलप र ZocDoc जस्तै समीक्षाको लागि, तर प्राय: सबै भन्दा राम्रो सिफारिशहरू तपाईले चिन्नुहुने व्यक्तित्वबाट आउँदछन्। तपाईंको सामाजिक सर्कललाई सोध्नुहोस् यदि उनीहरूसँग एक प्रदायक छ कि तिनीहरूले सन्दर्भ गर्न सक्दछ। र त्यसपछि सोध्नुहोस् किन उनीहरूले तपाईंलाई त्यो पेशागतमा सिफारिश गर्दै छन्। अधिक व्यक्ति सकारात्मक वा नकारात्मक हो, आफ्ना अनुभवहरू साझेदारी गर्न खुसी छन्। यदि तपाइँ अभ्यासबाट बाहिर स्थानान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ वा सर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको वर्तमान प्रदायकलाई सिफारिस गरिएको प्रदायकहरूको सूची सोध्न सक्नुहुन्छ।
The. स्थान, घण्टा र पहुँचता स्कोप गर्नुहोस्।
सुविधाजनक कुराहरु इमानदार हुनुहोस्। यदि तपाइँको नयाँ डाक्टर सहरको अर्को पट्टि हुनुहुन्छ र तपाइँको काम वा घरको नजिक हुनुहुन्न भने, तपाइँ अफिसमा जान कम इच्छुक हुन सक्नुहुन्छ। के प्रदायक सार्वजनिक यातायात द्वारा पहुँच योग्य छ वा सजिलो र निःशुल्क / सस्तो पार्कि afford छ? तपाईको नजीकमा रहेको स्वास्थ्य प्रदायकको खोजीले तपाईंको स्वास्थ्यलाई जाँचमा राख्न यो सजिलो बनाउँदछ।
अनुसूचीहरू कि जाल मामिलाहरू पनि पनी। यदि मानक कार्यालय घण्टा बाहिर उपलब्धता महत्त्वपूर्ण छ भने, उनीहरूले साँझ वा सप्ताहन्त अपोइन्टमेन्ट प्रस्ताव गर्छन् कि खोज्नुहोस्। साथै, तत्काल मेडिकल प्रश्नहरूको लागि घण्टा पहुँच पछि सोध्नुहोस् (जस्तै टेलिफोन सेवा वा अन्य कभरेज)। COVID-19 देखि, भर्चुअल अपोइन्टमेन्टहरू धेरै बढी सामान्य भएको छ; के यी गैर आपतकालिन वा अनुवर्ती भ्रमणका लागि उपलब्ध छन्?
अन्तमा, उनीहरू कसरी बिरामीहरूसँग कुराकानी गर्छन् सोध्नुहोस्: के तिनीहरू बिरामी पोर्टल प्रयोग गर्छन् वा पाठ सन्देश सेवाहरू प्रस्ताव गर्छन्? यी टेक्नोलोजी उपकरणहरूले हेरचाह गर्न सजिलो बनाउन सक्छ - वा प्रश्नहरूको उत्तर पनि - अधिक छिटो।
An. प्रारंभिक कुराकानी गर्नुहोस्।
कहिलेकाँही कागजमा सबै कुरा राम्रो लाग्न सक्छ, तर प्रदायकको कार्यालयका अन्य पक्षहरू ठीक फिट हुन सक्दैनन्। एक प्रदायक प्रतिबद्ध गर्नु अघि, कार्यालयलाई कल दिनुहोस्। यदि उनीहरू नयाँ बिरामीहरू स्वीकार गर्दै छन् भने (धेरै महत्त्वपूर्ण!) फेला पार्नुहोस्, र कुन प्रकारका बिरामीहरू प्रदायकसँग काम गरेर रमाईलो गर्छन्।
सोध्नुहोस् कि औसत पर्खाइ कति लामो समयदेखि अपोइन्टमेन्ट सुरक्षित गर्नुहोस् - के तपाईं प्रत्येक भ्रमणको बीचमा महिनौं कुर्नु पर्ने हुन्छ? के कार्यालयका कर्मचारीहरू सहयोगी देखिन्छन् वा तिनीहरू तपाईंलाई फोनबाट बाहिर निकाल्न हतारमा छन्? जब तपाईंको स्वास्थ्यको बारेमा छलफल गर्ने कुरा आउँदछ, तपाईं सकेसम्म सहज महसुस गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले आफूसँग कुराकानी गरिरहनु भएको अफिसमा कुनै फरक पर्दैन, र फोन स्क्रीनिंगले यसका लागि सहयोग गर्न सक्दछ।
An. अपोइन्टमेन्टको बेला तपाईलाई कस्तो लाग्छ याद गर्नुहोस्।
त्यसोभए तपाईंले यी चरणहरूको अनुसरण गर्नुभएको छ र सोच्नुहुन्छ कि तपाईंले सही प्रदायक पाउनुभयो। अब, तपाइँको पहिलो नियुक्ति समयमा अनुभवमा ध्यान दिनुहोस्। प्रतीक्षा र प्रतीक्षालय कोठा जस्तो छ? के कार्यालयका कर्मचारी मैत्री छन् वा सबैजना दयनीय देखिन्छन्? के डाक्टर तपाईंलाई चिन्न र तपाईंको स्वास्थ्यको चिन्ता बुझाउनमा रुचि राख्छ, वा उनीहरूले तपाईंलाई ढोका बाहिर हतार गर्न खोजिरहेका छन्?
तपाईंले देख्न चाहानुहुन्छ कि यदि उनीहरूको सञ्चार शैली तपाईंको पनि मिल्दछ भने। के तपाईं त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन तपाईं कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, एक संक्षिप्त र कुनै बकवास प्रदायक तपाइँको लागि एक मिल्दो हुन सक्छ। तर यदि तपाईं वास्तविक सम्बन्ध र सम्पूर्ण कुराकानीको कदर गर्नुहुन्छ भने, त्यो प्रदायक तपाईंको लागि राम्रो फिट नहुन सक्छ।
सत्य यो हो, तपाईको साथमा आउनको लागि यो अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण छ प्रदायक, र त्यो प्राप्त गर्न को लागी सब भन्दा सजिलो तरिका मध्ये एक समान संचार शैलीको साथ कसैलाई खोज्नु हो। सबै पछि, तपाईंको स्वास्थ्य शाब्दिक रूपमा तपाईं दुई कसरी कुराकानी मा निर्भर हुन सक्छ।
तपाईंको भ्रमण पछि, यदि तपाईंलाई यस्तो लाग्दैन कि यो प्रदायक तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हो, त्यो ठीक हो। तपाईंले कसैलाई देखिरहनु आवश्यक पर्दैन किनकि तपाईसँग अपोइन्टमेन्ट थियो, रोबर्ट जे साम्युएलसन, एमडी, एक पल्मोनोलॉजिष्ट, इंटर्निष्ट, र होराइजन मेडिकल ग्रुपका प्राथमिक केयर डाक्टर भन्छन्। यसले केहि समय लिन सक्दछ, तर यसका वरिपरि किनमेल गर्न लायक छ जब सम्म तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्यमा विश्वास गर्न सक्ने एक व्यक्ति पाउनुहुन्न।
अर्को चरण - बीमा थाहा दिनुहोस्
एक चोटि तपाईं नयाँ प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकमा बसिसक्नु भएपछि, यो सहज समयको लागि समय हो। तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई थाहा दिनु आवश्यक पर्दछ कि तपाईं डाक्टरहरू परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ (स्वास्थ्य बीमा योजनामा ​​निर्भर छन्), र तपाईंले तपाईंको पूर्व स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको भूतपूर्व प्रदायकले कुनै पनि मेडिकल रेकर्डहरू वा परीक्षण नतिजाहरूको हस्तान्तरण गर्न सक्दछन् जुन तपाईंको नयाँ डाक्टरमा फाइलमा छ; यसले कुनै पनि अनावश्यक परिक्षणहरू हटाउन सक्छ र नयाँ डाक्टरलाई तपाईंको मेडिकल ईतिहासको राम्रो बोध गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं यसो गर्न सहज महसुस गर्नुहुन्न भने, तपाईं नयाँ प्रदायकको कार्यालयमा यसको सट्टा अनुरोध गर्न व्यवस्था गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
गर्भावस्थाको दौरान मतलीको उपचार गर्ने र नगर्ने कार्यहरू
कति लामो methylprednisolone तपाइँको शरीर मा रहन्छ?
कति चाँडै सेक्स पछि तपाइँ योजना बी लिन सक्नुहुन्छ
इन्फ्लुएन्जा ए र इन्फ्लुएन्जा बी बीच के फरक छ?
एक फार्मेसी टेक्नीशियन एक फार्मासिस्ट बन्न सक्छ?
के तपाइँ खोपहरु को लागी एक नुस्खा चाहिन्छ?
जेब अधिकतम बाहिर व्यक्तिगत के हो